यो हो उत्तर कोरियाको गोप्य शहर, यहाँ बनाइन्छ खतरनाक हतियार - Internet Khabar
यो हो उत्तर कोरियाको गोप्य शहर, यहाँ बनाइन्छ खतरनाक हतियार
काठमाडौं । अमेरिकाले सैन्य कारवाही थाल्दा उत्तर कोरिया पनि युद्धको तयारीमा जुट्न थालेको छ।
दक्षिण कोरियाका सञ्चारमाध्यमहरूले दिएको खबरअनुसार, उत्तर कोरियाले आफ्नो रिसर्च एन्ड डिभेलोपमेन्ट सेन्टरमा बन्दै गरेका क्षेप्यास्त्रहरू राजधानी प्योङयाङ ल्याएको छ। त्यसबाहेक अनेकौं गोप्य स्थानमा पनि उसले क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरिरहेको छ । यसैक्रममा त्यहाँको ह्यामहुङ शहर पनि चर्चामा छ।
अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको रिपोर्टअनुसार, उक्त शहरमा धेरै गोप्य रासायनिक प्लान्टहरू छन् र क्षेप्यास्त्रको इन्धनमा यिनै प्लान्टहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कोरियाली युद्धमा अमेरिकाले यो शहर पूरै ध्वस्त पारिदिएको थियो।
उत्तर कोरियामाथि नजर राख्ने अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, रकेटमा प्रयोग हुने यूडीएमएच इन्धन ह्यामहुङस्थित प्लान्टमा बस्छन्। यसबाहेक यहाँबाट नै लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू पनि प्रहार गर्ने गरिएको छ। विगत केही महिनायता यहाँ सेनाको गतिविधि पनि बढेर गएको छ।
ह्यामहुङ उत्तर कोरियाको सबभन्दा ठूलो औद्योगिक शहरमध्येको एक हो। यहाँ कोइलाको ठूलो भण्डार छ र त्यो नै उत्तर कोरियाको आयको मुख्य स्रोत हो। उत्तर कोरियाले चीनमा कोइला निर्यात गर्छ। सन् १९९० को दशकमा भयंकर सुक्खा भएपछि यहाँबाट धेरै मानिस विस्थापित भएका थिए। त्यसपछि यसलाई औद्योगिक शहरका रूपमा विकसित गरियो।
यहाँ हतियारहरू उत्पादन हुने भएकाले विदेशीहरूलाई यहाँ आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यहाँका तस्वीरहरू उत्तर कोरिया सरकार आफैंले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। एजेन्सी
लामो श्वास लिनुहोस्, स्वास्थ्यलाई यस्तो फाइदा हुनेछ
शास्त्र अनुसार अब कलियुगको आयू कति छ ?
चीनमा ६.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प
दिए मञ्जुरी,, ५१औं जन्मदिनको अवसरमा पारी विवाह गर्दै सलमान खान
किन मोटाउछन् बिवाह पछि महिला ?
अनुसन्धान भन्छन, मोटोपन कम गर्ने उत्तम उपाय घ्यू, यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा